Ururka Warbaahinta Puntland ee MAP oo Suxufiyiin Tababar Uga Furay Garoowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Ururka Warbaahinta Puntland ee MAP oo Suxufiyiin Tababar Uga Furay Garoowe[Sawirro]
Ururka Warbaahinta Puntland ee MAP ayaa maanta uga furay magaaladda Garoowe Tababar ilaa 20 wariye oo ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee Puntland.
Ururka waxaa tababarkan ka taageeraya Hay’adda NED oo ka shaqeysa arrimaha Dimuqraadiyada ,waxaana ka qeybgalay Madaxda MAP,Dallada PUNSAA,wasiirkii hore Warfaafinta Puntland.
Faysal Khaliif Bare
Gudoomiyaha Ururka MAP Faysal Khaliif Bare oo furitaanka ka hadlay ayaa sheegay tababarkan yahay qaabka u qareemida iyo baarista xogta dhabta ah ee uu wariyuha u yeesho galaangalka taasoo ugu qareemayo shacabka.
“Waxaan tababarkan u Qabanay sidii Wariyeyaasha Puntland ay faham dhamaystiran uga Heli lahaayeen waxay tahay u Qareemid iyo waliba Galaan-gal..ayuu yiri
Mudane Faysal Khaliif Bare ayaa xusay in Tababarkan uu wariyuhu khibrad ka qaadan doono taasoo ay ka muuqan doonto shaqooyinkooda ,isagoona ku dhiirigeliyey Wariyaasha iney ku shaqeeyaan Casharada ay qaataan.
.”Wariyayaasha halkan jooga waxaa laga soo dhex xuli doono guddi MAP kala shaqeeya samaynta daneeyayaal bah-wadaag la ah saxaafadda Puntland si loo helo xeer saxaafadeed oo horumarsan oo hadana qeexaya xoriyadda iyo madax banaanida ..ayuu yiri
Guddoomiyaha PUNSAA Nuur Shire Cismaan ayaa dhankiisa si faahfaasan uga hadlay muhiimad iney wariyaashu u qareemaan dadka taasoo u barbar dhig ku sameeyey qareemida ay sameeyaan iyo qareemida wariyaasha.
Nuur Shire Cismaan ayaa sheegay in wariyaha uu yahay shakhsiga keliya ee soo saari kara xuquuqda qarsoon ee u baahan in shaaca laga qaado isla markaana si daacad ah looga waramo.
Ururka MAP ayaa sheegay in tababarkan mid dhigiisa ah lagu qaban doono magaaladda Boosaaso isla markaana uu yahay mid ka duwan kuwii hore ay qaban jireen.